မော်နီတာမှာအသေအချာမကြည့်ဘဲ အဲဗာတန်ဘက်သို့ ပင်နယ်တီပေးခဲ့သလား? – Play Maker Sports Journal
မော်နီတာမှာအသေအချာမကြည့်ဘဲ အဲဗာတန်ဘက်သို့ ပင်နယ်တီပေးခဲ့သလား?
February 21, 2021 playmaker Sports News 0
လက်ရှိအချိန်မှာဘောလုံးပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောအများဆုံးကတော့ထရန်းအလက်ဇန္ဒားအာနိုးနှင့်ဒိုမီနစ် ကယ်ဗတ်လီဝင်းတို့အကြားပြိုလဲကျမှုမှုအပေါ်ဒိုင်လူကြီးခရစ်ကာဗာနက်ချ်ကမော်နီတာကြည့်ပြီးနောက်ပင်နယ်တီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးပရိသတ်များကဒိုင်လူကြီးဟာကွင်းဘေးရှိမော်နီတာတွင်အဖြစ်အပျက်ကိုအသေအချာကြည့်ခြင်းမပြုဘဲ ပင်နယ်တီပေးခဲ့တာလို့ယူဆနေကြပါတယ်။လီဗာပူးပရိသတ်များကအဲဗာတန်တိုက်စစ်မှူးကထရန်းအလက်ဇန္ဒား အာနိုးအပေါ်မှကျော်သွားခြင်းဖြစ်ရာပင်နယ်တီမပေးသင့်ကြောင်းယုံကြည်နေကြပါတယ်။
ေမာ္နီတာမွာအေသအခ်ာမၾကည့္ဘဲ အဲဗာတန္ဘက္သို႔ ပင္နယ္တီေပးခဲ့သလား?
လက္ရွိအခ်ိန္မွာေဘာလုံးပြဲမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအေျပာအမ်ားဆုံးကေတာ့ထရန္းအလက္ဇႏၵားအာႏိုးႏွင့္ဒိုမီနစ္ ကယ္ဗတ္လီဝင္းတို႔အၾကားၿပိဳလဲက်မႈမႈအေပၚဒိုင္လူႀကီးခရစ္ကာဗာနက္ခ်္ကေမာ္နီတာၾကည့္ၿပီးေနာက္ပင္နယ္တီေပးဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
လီဗာပူးပရိသတ္မ်ားကဒိုင္လူႀကီးဟာကြင္းေဘးရွိေမာ္နီတာတြင္အျဖစ္အပ်က္ကိုအေသအခ်ာၾကည့္ျခင္းမျပဳဘဲ ပင္နယ္တီေပးခဲ့တာလို႔ယူဆေနၾကပါတယ္။လီဗာပူးပရိသတ္မ်ားကအဲဗာတန္တိုက္စစ္မႉးကထရန္းအလက္ဇႏၵား အာႏိုးအေပၚမွေက်ာ္သြားျခင္းျဖစ္ရာပင္နယ္တီမေပးသင့္ေၾကာင္းယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။